नेपालको गोल्डस्टार जुत्ता अमेरिकी बजारमा - Sawal Nepal
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७८ आश्विन २६, ११:२४
नेपालको गोल्डस्टार जुत्ता अमेरिकी बजारमा पनि प्रवेश गर्न लागेको छ । गोल्डस्टार जुत्ताको निर्माता तथा उत्पादक वितरक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सले अमेरिकामा आधिकारिक वितरक नियुक्त गरी नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा बिक्री–वितरण सुरु गर्न लागेको हो । डालस र सन फ्रान्सिस्कोबाट गोल्डस्टार अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले यही अक्टोबर १७ तारिखका दिन टेक्सासको डालस र अक्टोबर २४ देखि सन फ्रान्सिस्कोमा जुत्ताको बिक्री–वितरण सुरु गर्नेछ ।
न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सका अध्यक्ष आमिरप्रताप जबराले गोल्डस्टार जुत्ता अमेरिकाको निर्दिष्ट स्थानहरूबाट उपलब्ध हुने घोषणा गरे । “हाम्रो अनुभवको तीन दशकको समयमा दुई महाद्वीपहरू पार गरी हामी अब संयुक्तराज्य अमेरिकामा आइपुगेका छौँ । यो सबैभन्दा गर्वको कुरा हो र हामी अमेरिकामा पनि आकर्षक जुत्ताहरू ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ,” उनले भने ।
आफ्नो उत्पादन अमेरिकामा आइपुग्दा कम्पनीको लक्ष्य मानिसको विश्वास र उपभोक्ताको चाहना पूरा गर्नु नै रहेको उनले बताइन् ।
ग्रेटर न्युयोर्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क ज्याफले गोल्डस्टारलाई अमेरिकामा स्वागत गर्दै भने, “म विश्वस्त छु कि गोल्डस्टारले अमेरिकीहरूको मन जित्नेछ ।”
आरामको जुत्ता किन्नु नै उपभोक्ताहरूको पहिलो चाहना हुने र त्यो चाहना गोल्डस्टारले पूरा गर्न सक्ने उनले बताए । उनले नाइकीजस्तै ब्रान्डसँग समेत गोल्डस्टारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । मेरिल्यान्ड हाउस अफ डेलिगेट्सका सदस्य ह्यारी भण्डारीले गोल्डस्टार टोलीलाई अमेरिकी बजारमा प्रवेशका लागि बधाई र सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।गोल्डस्टारको जुत्ता स्व. नूरप्रताप जबराको परिकल्पनामा उत्पादन गरिएको ब्रान्ड हो । किरण सु म्यानुफ्याक्चर्सले सन् १९९० देखि गोल्डस्टार जुत्ताको उत्पादन गर्न थालेको हो । यो जुत्ता स्व. राणाको परिकल्पनाअनुसार नै नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय जुत्ता बन्न पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
‘जापान सागरमा छिरे रुसी जलसेनाका पाँच जहाज’